Ny raharaham-panjakana amin’ny ankapobeny mihitsy. Mijoro ny sendikà frantsay sy ny vahoaka tsy manaiky na manohitra ny tetikasan’ny filoha Macron mahakasika ny fisotroan-dronono izany izay heverin’izy ireo fa mety hanimba sy hanitsakitsaka ny zon’ireo mpisotro ronono. Marihina hatrany fa io fanavaozana fisotroan-dronono izay anisan’ny programanasan’ny filoha frantsay nasongadiny tamin’ny fampielezan-kevitra tamin’ny vahoaka frantsay. Marina fa nofidian’ny vahoaka hitantana ny firenena ny filoham-pirenena kanefa tsy voatery ny programanasany rehetra nambarany no naharesy lahatra ny vahoaka nifidy azy. Mijoro ny olona manohitra izany satria heverin’izy ireo mifanohitra amin’ny tombontsoan’ny vahoaka izay.